पत्नीपीडित पुरुषका उजुरीको चाङ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सुन तस्करीका ६२ अभियुक्तविरूद्ध मुद्दा दर्ता हुँदै, को–को परे ? (नामावलीसहित)
सार्वजनिक विदा कटौतीमा प्रचण्ड असन्तुष्ट, बादलको बग्लै मत ! →
बिर्तामोड : ‘म विदेशमा भएका बेला श्रीमतीले सम्बन्धविच्छेद गरिछन्, धनसम्पत्ति पनि सबै सकिछन्। मेरो त बिजोक नै भयो’, दुई महिनाअघि बिर्तामोड नगरपालिका–५ का एक युवक ब्रह्मलाल आचार्य बिर्तामोडको न्यायिक समितिमा पुगेर आफ्नो पीडा सुनाउँदै थिए। न्यायिक समिति संयोजक नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले ती युवाको सबै कुरा सुनिन्। उपप्रमुख प्रसाईंले आचार्य बिरामी रहेको थाहा पाइन्। उपप्रमुखले ती युवालाई सल्लाह दिँदै भनिन्, ‘पहिले उपचार गरेर तपाईं निको हुनुस्। अनि समितिमा यस’bout कुरा गरौंला।’
उपप्रमुख प्रसाईंले दुःख मान्दै सुनाइन्, ‘मुटुका बिरामी ती युवकको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। उनको समस्या’bout समितिमा छलफलको विषय नै बन्न पाएन।’
समितिमा जग्गा, सम्बन्धविच्छेदमा, म्यानपावर ठगी र लेनदेनका मुद्दा बढी आउने गर्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।(अन्नपूर्ण )